सोमबारे व्र’त बस्नुभएको छ ? थाहा पाउनुहोस् सोमबार व्रत बस्दाका फाइदाहरू » बुद्ध भूमि नेपाल
मानिसका आआफ्नै इ’च्छा हुन्छन् । कोही दैनिक नयाँ नयाँ परिकार खाने अनि कोही भोकै व्रत बस्ने । धार्मिक तथा वैज्ञानिक दुवै का’रणबाट हप्तामा एक दिन बस्ने व्रत स्वा’स्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।
धर्म’शास्त्र अनुसार व्रत शारिरीक स्वा’स्थ्यको दृ’ष्टि महत्वपूर्ण छँदैछ, बार अनुसारको लाभ पनि फरकफरक रहने वि’श्वास गरिन्छ । सोमबार व्रत ब’स्दा के फाइदा हुन्छ ? धर्मशास्त्रमा के भनिएको छ ? तपाईंलाई चासो हुन सक्छ । सोमबारको व्रत बस्दा शिव र पार्वतीको पुजा तथा आराधना गरिन्छ ।
चिकित्स’कहरुले पनि हप्तामा एक दिन खाना नखाई ‘फास्टिङ’ बस्दा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने बताउँछन् । तर, बिरामी व्यक्तिले भने, चि’कित्सकको राय अनुसार खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
शास्त्रले भन्छ – झु’क्किएर पनि यी तीन समयमा नसुत्नु
शास्त्र अनुसार, हामीले सुत्नु भन्दा अगाडी जहिल्यै विचार पु¥याउनुपर्छ । गलत समयमा सुत्दा हाम्रो स्वा’स्थ्यलाई बेफाईदा पु¥याउनुको साथै हानिकारक मानिन्छ । यी हुन् सुत्नै नहुने तीन समय
शास्त्र अनुसार, घाम झु’ल्किएपछि पनि सुतिरहनेसँग धनकी देवी लक्ष्मी रिसाउँछिन् । त्यसरी सुत्ने ब्यक्तिहरु जति पैसा भएपनि सन्तुष्ट रहन सक्दैनन् । मानसिक तनाव हुने मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदैन ।
मध्यान्नको समयमा पनि कहिल्यै सुत्नु हुँदैन । यसले स्वास्थ्यमा नका’रात्मक प्रभाव पार्छ । विशेषगरी दिउँसोको खानापछि सुत्ने मान्छेमा भुँडी बढ्ने समस्या देखिन्छ । शात्र अनुसार मध्यान्नमा सुत्ने मानिस रोगी हुन्छ ।
घाम अ’स्ताउने बेला पनि कहिल्यै सुत्नु हुँदैन । शास्त्र अनुसार घाम अ’स्ताउने समय भनेको पुजा अर्चना गर्ने समय हो । विनाकारण यो समयमा सुत्ने व्यक्तिले कहिल्यै सफलता पाउन सक्दैन ।
#जिन्दगीको पाना बाट